Kahortagga Infekshanka Fayadhawrka-19 iyo Tilmaanta Xakameynta ee TSE ilaa Warshadaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKahortagga Cudurka Fayadhawrka 19 iyo Tilmaanta Xakameynta ee TSE ilaa warshadaha
Kahortagga Cudurka Fayadhawrka 19 iyo Tilmaanta Xakameynta ee TSE ilaa warshadaha
21 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, coronavirus, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
kahortagga cudurka iyo tilmaamaha xakameynta fayadhawrka nadaafadda ee warshadlayaasha
"Covid-19 Nadaafadda, Ka Hortagga Cudurrada iyo Tilmaanta Xakamaynta" waxaa diyaariyay khubarada Machadka Istaandarada Turkiga (TSE), kaas oo hagitaan u noqon doona la dagaallanka shirkadaha ganacsiga wershadaha ee Covid-19.
Hagahan ayaa hagitaan u noqon doona ururada warshadaha dagaalka ka dhanka ah Covid-19 dhanka nadaafada iyo kahortaga cudurka. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in hagahan ujeedadiisu tahay inuu siiyo warshadleyda warshadaha ee dhammaan waaxyada macluumaad ku saabsan kahortaga cudurka iyo hanaanka xakamaynta, Wasiirka Varank wuxuu yiri: “Hagahan waxaa loola jeedaa in xirfadleyda wershadaha ee dhammaan waaxdu ay wax ka bartaan habka looga hortago cudurka iyo habka xakamaynta. Tallaabooyinka aan ka qaadnay daryeelka caafimaadka shaqaalaha, booqdeyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, taasi waa, dhammaan daneeyayaasha shirkadaha warshadaha. Shirkadaha kuma soo rogno kharash badan. Marka, waxaan soo jeedinaynaa in la qaado tillaabooyin fudud oo wax-ku-ool ah. ” ayaa yidhi. Isagoo ka codsanaya ururrada warshadaha in ay fiiro gaar ah siiyaan dhammaan tallooyinka ku jira buug-gacmeedkan, haddii ay rabaan inay soo saaraan wax-soo-saar amaan ah oo nadaafadeed xaruntooda, Wasiir Varank wuxuu yidhi, “Kaliya maa hanuunin doonto shirkadaha inta ay la dagaallamayo cudurka faafa. Waxay kaloo hubin doontaa in shirkaduhu raacaan jaangooyooyin la isku halleyn karo oo nadaafadeed oo loo baahan yahay mudada ka dambeysa cudurka faafa. Waxaan baari doonnaa shirkadaha si isku mid ah waxaanan siin doonaa COVID-19 Shahaadada Soosaarka Badbaadada iyada oo ah nooc shahaado caalami ah oo la siinayo kuwa ku baaraya kormeerka. ” muujinta ereyga.
Isagoo ogaanaya in shahaadada ay sameysay TSE ay faa'iidooyin muhiim ah u keeni doonto xirfadlayaasha warshadaha, ayuu Varank yiri, “Waqtiga soo socda, shahaadada noocan ahi waxay caan ku noqon doontaa ganacsiga caalamiga ah. Waa in feejignaan dheeraad ah la siiyaa haddii macaamiisha shisheeye ay buuxiyaan shuruudaha nadaafadda ee shirkadaha ay la macaamilayaan. Kuwa iyagu sameeya waxsoosaarka iyagoo leh xaalado nabdoon waxay sidoo kale noqon doonaan kuwa ka taliya suuqa. Waxaan qorsheyneynaa inaanu ballaarinno waxqabadka shahaadadan, oo aan ku bilaabi doonno xarumaha warshadaha, qaybaha kale mustaqbalka; waxaan rabnaa inaan dareenka aaminaada udub dhexaadka u nahay dhamaan howlaha dhaqaalo aruurinta. ” ayuu hadlay.
Wasiirka Varank wuxuu qabtay shir saxaafadeed Wasaaradda si loo soo bandhigo hagida ay soo diyaariyeen khubarada TSE waxaana ku jira tillaabooyinka laga qaadayo dagaalka ka dhanka ah shirkadda Covid-19 ee shirkadaha warshadaha. Wasiir Varank wuxuu xusay in tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee masiibada, ay ku guuleysteen la dagaallanka viruska iyagoo uga mahadcelinaya siyaasadaha wax ku oolka ah ee ay ku dhaqmayaan hoggaanka Madaxweyne Erdoğan. Isagoo ku nuux nuuxsaday inay ku dhaqaaqayaan qaab firfircoon dhammaan dhinacyada maamulka shacabka oo leh isugeyn guud, ayuu yiri Varank khudbaddiisa:
SIYAASADDA LACAGTA: Annaga oo ah Wasaaradda Wershadaha iyo Teknolojiyada, waxaan ku sheegnay meel kasta in mudnaantayadu tahay shaqaalaha ka shaqeeya tallaabooyinka aan qaadnay muddadan. Wadashaqayn dhaw oo lala yeesho daneeyayaashayada waaxda dhabta ah, waxaan ka hortagnaa cabashooyinka suurtagalka ah. Laakiin anagoo hubinayna sii wadida wax soo saarka, qadkayaga cas wuxuu ahaa caafimaadka shaqaalaha.
HALKAN HOOSE: Turkiga, wuxuu ka yimid warshadaha tamarta. Waxsoosaarka warshaduhu wuxuu ka kooban yahay in kabadan 180 boqolkiiba oo ka mid ah 90 bilyan doollarka loo dhoofiyo. 5 iyo nus milyan shaqaale ah oo ka shaqeeya wax soo saarka ayaa ah halyeeyada aan magacyadooda laheeyn ee guushaan gaadhay. Waxaan ku dadaaleynay inaan sii wadno kaabayaasha adag ee sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah inta lagu gudajiro howlaha faafa. Nadaafadda Covid-19, Ka Hortagga Cudurrada iyo Tilmaanta Xakamaynta ayaa ka tarjumeysa ruuxan.
WAAN KU SAARNAA MAWDUUCKA: Iyada oo la raacayo dariiqa faafa iyo baahiyaha soo socda, waligeen ma qaadanin isfaham sida joojinta wax soo saarka gabi ahaanba. Tilmaantaan waxaan u diyaarinnay yoolalka loogu talagalay dhaqaatiirta warshadaha ee dhamaan waaxaha si ay wax uga bartaan kahortaga cudurka iyo nidaamka xakamaynta Tallaabooyinka aan ka qaadnay daryeelka caafimaadka shaqaalaha, booqdeyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, taasi waa, dhammaan daneeyayaasha shirkadaha warshadaha. Waxaan soo saarnay qaab ay dhammaan warshadeeyaasheena si fudud u adeegsan karaan.
CADAALADU WAA KA BADAN: Waxaan ku soo bandhignay qaab hagaagsan oo jajaban oo hagaha ku yaal. Si kastaba ha noqotee, kuma soo rogno qarash sarreeya shirkadaha. Marka, waxaan kugula talineynaa inaad qaaddo tallaabooyin sahlan laakiin wax ku ool ah. Xaaladaha faafa, shirkaduhu waa inay si adag u raacaan sharciyadan. Si kastaba ha noqotee, haddii xeerarkan la raaco; Saamaynta cudurka faafa ee waxsoosaarka ayaa hoos u dhici doonta isla markaana baaba'a, caabbinta qaybta dhabta ah ee masiibada ayaa sii kordheysa, iyo iyada oo ay sii kordhayaan baahida shisheeye, soosaarayaashayadu waxay ka horreeyaan kuwa la tartamaya muddada is-daba-marinta.
SHAHAADADA AMMAANKA SAFE waxaa la siin doonaa: Tilmaamahan kuma hagi doono shirkadaha kaliya wax ka qabashada cudurka. Waxay sidoo kale hubin doontaa in shirkaduhu raacaan jaangooyooyin la isku halleyn karo oo nadaafadeed oo loo baahan yahay muddadii ka dib cudurka faafa. Xarumaha warshadaha waxay awood u yeelan doonaan inay codsadaan TSE haddii ay ka soo baxaan heerarka ku qoran Buugga oo ay hawlahooda u fuliyaan sida ugu habboon. Codsaduhu wuxuu kormeeri doonaa shirkadaha si ku habboon oo wuxuu siin doonaa COVID-19 Shahaadada Soosaarka Badbaadada iyada oo ah nooc shahaado caalami ah oo la siinayo kuwa ku baaraya kormeerka.
WAA MADAXWEYNE ADVANTAGE: Dukumintigan ayaa u keenaya faa iidooyin muhiim ah warshadeeyaasheena. Waxay hubin doontaa in shaqaaluhu ku aaminaan goobahooda shaqo oo ay gacan ka geystaan ​​kordhinta wax soo saarka. Waxay dhiiri galin doontaa wax soo saarka ku haboon caafimaadka aadanaha waxayna meesha ka saartaa calaamadaha su’aasha maskaxda macaamiisha xagga nadaafadda iyo fayadhowrka. Waqtiga soo socda, shahaadada noocan ahi waxay caan ku noqon doontaa ganacsiga caalamiga ah. Waa in feejignaan dheeraad ah la siiyaa haddii macaamiisha shisheeye ay buuxiyaan shuruudaha nadaafadda ee shirkadaha ay la macaamilayaan. Kuwa iyagu sameeya waxsoosaarka iyagoo leh xaalado nabdoon waxay sidoo kale noqon doonaan kuwa ka taliya suuqa.
WAA LAGU SAMEEYA KARA DALKA KALE: Waxaan qorsheyneynaa inaanu ballaarinno waxqabadka shahaadadan, oo aan ku bilaabi doonno xarumaha warshadaha, qaybaha kale mustaqbalka; Waxaan rabnaa inaan dareenka aaminaada ka dhigno bartamaha howlaha oo dhan.
“XAQIIQOOYINKA KA DANBEEYA EE HABKA AY UU UU SHAQAYNAYO”
Wasiirka Varank, oo su’aal ka keenay xaaladdii ugu dambeysay ee tijaabada Covid-19 ee OIZs, ayaa yiri, “Tani waxay ahayd codsi ay xarumaha wax soo saarku naga dalbadeen. Imtixaanka 'Covid-19' ee loogu talagalay shaqaalaha ka shaqeeya ururada warshadaha. Sidaa darteed, qofna shaki kuma jiro inuu hubinayo deegaan wax soo saar badbaado leh. Waxaan halkan kala shaqeyneynaa wasaaradeena caafimaadka, gaar ahaan quseeya raaxada shaqaalahayaga. kaliya waxay sameeyeen shaybaar si ay ugu adeegaan warshadaha una tijaabiyaan sambalka la qaaday. Markaan eegno heerka kiisaska tijaabada, waxaan arki karnaa jaantuskiiba 3 XNUMX kun. Tani aad bay nooga farxisaa. Soosaarayaasha ayaa sidoo kale arka in tallaabooyinka ay qaadaan ay shaqeeyaan, ayuu yidhi.
“11 Shirkaduhu way Codsadaan”
Wasiir Varank wuxuu kajawaabay su'aasha marxalada ay codsiyadu kujiraan heerarkii ay diyaarisay TSE ee maaskaro maro ah:
TSE ahaan, waxaan abuurnay oo daabacnay heerarkeenna si aan go'aan uga gaarno dharka maaskaro ee ay ku iibsanayso suuqa, gaar ahaan muwaaddiniinta, si aysan ugu welwelin. Shirkadaha soo saaraya u hoggaansanaanta heerarkan waxay quseeyaan TSE macluumaadka labadaba xarunta iyo alaabada muunad ahaanta ah. Baadhitaanno shaybaar oo faahfaahsan oo kuwan ka dib, waxaa la siiyaa shahaadada TSE ee waafaqsanaanta. Ilaa maanta, 11 shirkadood ayaa sameeyey codsiyadooda si ay u helaan shahaadooyinka TSE, qaar ka mid ah waxay dhammaystireen hawlihii kormeerka ee xarumaha wax soo saar, iyo tijaabooyin shaybaar oo wajiga lagu duubto ayaa bilaabmay.
Loogu talagalay "Covid-19 Nadaafadda, Ka Hortagga Cudurrada iyo Hagaha Xakamaynta" Riix halkan
Wicitaan lagu Bixinayo Taageero Laba Jibaaran Oo Loogu Talo Galay Warshadaha Oo Loogu Talo Galay TÜBİTAK
Ankara - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Magaalada Istanbul Marxaladda 2aad ee Dhul-gariirka Ka Hortagga Qandaraaska 2aad…
Ankara - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul Marxaladda 2aad ee ka-hortagidda dhul-biyoodka…
Ogeysiiska Qandaraaska: Furitaanka Ka-Hortagga Dabka ee ku yaala Tareenka Tareenka
Tababbar kulanka ka hortagga shilalka ee kuyaala Incirliova
Machadka Istaandarada Turkiga
Wasiir Karaismailoğlu Ku hadlaa Shirweynaha IT Digital Digital Summit!
Wasiirka Varank: Waxaan diirada saareynaa sidii loo gaari lahaa Soo kabasho Joogto ah
Kahortaga daadadka ee Kütahya
STM System Teleferik Inc. Tijaabiye Tijaabo ah iyo Kormeeraha Wareegga